နတ်တွေကန်တော့တာ သရဏဂုံ ပျက်သလား .. ? ( ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အဖြေ ) - Focus Myanmar
နတ်တွေကန်တော့တာ သရဏဂုံ ပျက်သလား .. ? ( ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အဖြေ )
May 18, 2019 By Myanamr Plus in တရားအဆုံးအများ, ဗဟုသုတ Tags: ရတနာ, သရဏဂုံ
ရတနာ သုံးပါး ကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့ ဥပါသကာ မှန်ရင် ရတနာသုံးပါး ပြင်ပ အရာတွေကို အလေးအမြတ် မပြုအပ်ဘူး။
ရတနာသုံးပါးရဲ့အပြင်ပမှာ ရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို –
နံပါတ် ၁ – မိမိကိုယ်ကို အပ်နှင်းလှူဒါန်းခဲ့လျှင်၊
နံပါတ် ၂ – ကိုးကွယ်လည်းလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာအဖြစ်နဲ့ ဆည်းကပ်ခဲ့လျှင်၊
နံပါတ် ၃ – ကိုးကွယ်အားထားရာအဖြစ် ဆရာအဖြစ်နဲ့ ရည်ညွှန်းပြီး မိမိကိုယ်ကို တပည့် အဖြစ်နဲ့ ခံယူဆောက်တည်ခဲ့လျှင်၊
နံပါတ် ၄ – အလွန်အမင်း ရိုသေစွာ ရှိခိုးခဲ့လျှင် – မူလဆောက်တည်ထားတဲ့ သရဏဂုံသည် အလိုလို ပျက်တယ်။
ဒီလို ပျက်စီးနည်းသည် သာဝဇ္ဇ – အပြစ်ရှိတဲ့ သရဏဂုံ ပျက်စီးနည်း ဖြစ်တယ်။
အပြစ်ရှိတဲ့ ပျက်စီးနည်းဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ –
သော စ အနိဋ္ဌဖလော ဟောတိ။
နောင်တစ်ချိန်မှာ မကောင်းတဲ့ အကျိုးလည်း ရနိုင်တယ်တဲ့။
ရတနာသုံးပါးရဲ့ အပြင်ဘက်က ဖြစ်တဲ့ ဆူးလေနတ်ကြီးတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အဲဒီနတ်တွကို အလွန်အမင်း ရိုသေစွာ ရှိခိုးလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း မူလဆောက်တည်ထားတဲ့ သရဏဂုံသည် အလိုလို ပျက်စီးသွားတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ပန်းတွေ လှူတယ်။ ရေချမ်းတွေ လှူတယ်။ လှူပြီးလို့ စေတီတော်ကို ရှိခိုးပြီးတာနဲ့ ဟိုဘက် လှည့်ပြီးတော့ နတ်ကို ရှိခိုးလိုက်တာနဲ့ မူလဆောက်တည်ထားတဲ့ သရဏဂုံသည် အလိုလို ပျက်စီးသွားတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ အင်မတန် အဖိုးတန်နေတဲ့ သရဏဂုံကို မပျက်စီးစေသင့်ဘူ။ အသိအလိမ္မာလေးနဲ့ စောင့်ရှောက်သင့်တယ်။
မင်းကြီးတို့ မင်းကလေးတို့ကို သွားပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခဲ့လျှင်၊ အလွန်အမင်း ရိုသေစွာ ရှိခိုးခဲ့လျှင်လည်း မူလဆောက်တည်ထားတဲ့ သရဏဂုံသည် အလိုလို ပျက်စီးသွားတယ်။
ပျက်စီးရုံတွင် မဟုတ်ဘူး သူက –
သာဝဇ္ဇော – အပြစ်လည်း ရှိတယ်၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ မကောင်းတဲ့ အကျိုးလည်း ရနိုင်တယ်။
ဒီ မင်းကြီးမင်းကလေးဆိုတဲ့ ဟာတွေသည် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလား? ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
မင်းကြီးတို့ မင်းကလေးတို့ ဝင်လာပြီ ဆိုလို့ရှိလျှင် သူတို့ ဘာလုပ်သလဲ..?။
အရက်သောက်တယ်၊ ကလည်း ကတယ်။ ဒီလို အရက်သောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မိမိတို့က ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပြီ ဆိုကြပါစို့။ မိမိအဆင့်က အရက်သမားကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့အဆင့် ရောက်မသွားဘူးလား? အလိုလို ရောက်သွားတယ်။
နောက်တစ်ခု – ဒကာကြီးတွေ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ဘုန်းကြီးတို့ မြန်မာပြည်မှာ ကျေးရွာပေါင်း နှစ်သောင်းကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ နတ်တော် ပြာသို ဝန်းကျင်လောက် ရောက်လာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အလေ့အထအရ ကျေးရွာတိုင်းလိုလိုမှာ နတ်ပွဲဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျေးရွာနှစ်သောင်းကျော် ရှိတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့မှာ ပျမ်းမျှခြင်းနှုန်းနဲ့ တွက်မယ်ဆိုလျှင် ဆယ်ရွာ­မှာ နတ်ပွဲတစ်ပွဲလောက်တော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ရွာမှာ နတ်ပွဲတစ်ပွဲနှုန်းဖြင့် ကျေးရွာပေါင်း နှစ်သောင်းကျော်ဆိုတော့ တစ်နေ့မှာ နတ်ပွဲပေါင်း နှစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက် ရှိမယ်။ နတ်တော် ပြာ­သိုဝန်းကျင်လောက် ပြောတာပါ။ ဒီတော့ တစ်နေ့မှာ နတ်ပွဲပေါင်း နှစ်ထောင်လောက်ရှိတော့ ဟို­နတ်ပွဲမှာလည်း မင်းကြီး မင်းကလေးကို ပင့်ပြန်ပြီ၊ ဝင်ပူးပြန်ပြီ။ ဒီနတ်ပွဲကလည်း မင်းကြီးမင်းကလေး ပင့်ပြန်ပြီ၊ ဝင်ပူးပြန်ပြီ။ မင်းကြီးမင်းကလေးက ဝင်ပူးလာပြီဆိုလို့ရှိလျှင် အချိန်ကလည်း နည်းနည်းပေးရဦးမယ်။ အရက်သောက်ဖို့ အချိန်ကလည်း ပေးရသေးတယ်လေ။ ကဖို့ ခုန်ဖို့ ဓားမြှောက်ပြဖို့ အချိန်ကလည်း ပေးရသေးတယ်။
ဒီတော့ နတ်ပွဲတစ်ပွဲကို သူက ငါးမိနစ်လောက် အချိန်ပေးမယ် ဆိုရင်ပေါ့။ သူ တစ်နေ့တစ်နေ့မှာ ကနိုင်တာ တစ်နာရီမှာ နတ်ပွဲ တစ်ဆယ့်နှစ်ပွဲ ရ­မယ်။
တစ်နေ့မှာ နတ်ပွဲတွေက များသောအားဖြင့် နံနက် ၈-နာရီမှ ည ၄-နာရီ၊ ၅-နာရီအထိပဲ က,တော့၊ ဆယ်နာရီပဲ ထားပါတော့။ တစ်နေ့ ဆယ်နာရီဆိုတော့ နတ်ပွဲပေါင်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်။ အခုဟာက နတ်ပွဲပေါင်း တစ်နေ့တစ်နေ့ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် နှစ်ထောင်ကျော်နေတော့ သူပေးနိုင်တဲ့ အချိန်က တစ်နေ့ နတ်ပွဲပေါင်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်လောက်အတွက်ပဲ ရှိတယ်။
ဟိုနတ်ပွဲကလည်း မင်းကြီးမင်းကလေး ပူးပြန်ပြီ။ ဒီနတ်ပွဲကလည်း မင်းကြီးမင်းကလေး ပူးပြန်ပြီ။ အဲဒါ ဝင်ပူးနေတာတွေ အကုန်လုံး မင်းကြီးမင်းကလေး ဟုတ်,မဟုတ် ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားဖို့ မလိုဘူးလား? လိုနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အနီးစခန်းဆရာတော်ဘုရားကတော့ သူ့ရဲ့တရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာ သူက ဘယ်လိုပြောထားသလဲ –
“လူ့လောကမှာ အလိမ်ခံလူတန်းစားက အမြဲတမ်း ရှိတယ် လိမ်မည့်လူသာ လိုတာ..” တဲ့။
လိမ်မည့်သူကသာ ကျကျနန လိမ်။ အလိမ်ခံ လူတန်းစားက အမြဲတမ်း ရှိပြီးသား ဖြစ်တယ်။
ဒါက ဒကာကြီးတွေ တော်တော်လေး လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားဖို့ ကောင်းတယ်။
ဒီလောက်တောင် အဆင့်နိမ့်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဘုရားနဲ့ တန်းတူထားပြီးတော့ အိမ်မှာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေကြတယ်။ အဲဒီလို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြတဲ့အထဲမှာ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်းတစ်ချို့လည်း ပါနေကြပြန်တယ်။
သူတို့ကနေ ရှေ့ဆောင်ပြီးတော့ မင်းကြီးမင်းကလေးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တယ်။ ဆည်းကပ်လိုက်တော့ သူက ဘာအမိန့်ထုတ်သလဲ? သူ့ကျောင်းထဲ ဝက်သား မသွင်းရဘူး..၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ? မင်းကြီးမင်းကလေး မကြိုက်လို့.. ။ သူက ဘုရား မကြိုက်တဲ့ အလုပ်ကျတော့ သူ ရဲရဲလုပ်တယ်၊ အဝတ်ကတော့ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်း။ ဒါပေမဲ့လို့ သူက မင်းကြီး မင်းကလေး မကြိုက်တာကျတော့ ကျောင်းထဲ မသွင်းရဘူး။ ဘုရား မကြိုက်တာကျတော့ ကျောင်းဝင်းထဲသွင်းတယ်၊ ရှက်ဖို့ မကောင်းဘူးလား? သိပ်ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နောက်လိုက် ဒကာဒကာမတွေအတွက် သိပ်ပြီးတော့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။
Credit to Zaw Wint
နတျတှကေနျတော့တာ သရဏဂုံပကျြသလား .. ? ( ဖားအောကျဆရာတျောဘုရားကွီး၏ အဖွေ )
ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကှယျဆညျးကပျတဲ့ ဥပါသကာမှနျရငျ ရတနာသုံးပါး ပွငျပ အရာတှကေို အလေးအမွတျ မပွုအပျဘူး။
ရတနာသုံးပါးရဲ့အပွငျပမှာ ရှိနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို –
နံပါတျ ၁ – မိမိကိုယျကို အပျနှငျးလှူဒါနျးခဲ့လြှငျ၊
နံပါတျ ၂ – ကိုးကှယျလညျးလြောငျး ပုနျးအောငျးမှီခိုရာအဖွဈနဲ့ ဆညျးကပျခဲ့လြှငျ၊
နံပါတျ ၃ – ကိုးကှယျအားထားရာအဖွဈ ဆရာအဖွဈနဲ့ ရညျညှနျးပွီး မိမိကိုယျကို တပညျ့အဖွဈနဲ့ ခံယူဆောကျတညျခဲ့လြှငျ၊
နံပါတျ ၄ – အလှနျအမငျး ရိုသစှော ရှိခိုးခဲ့လြှငျ – မူလဆောကျတညျထားတဲ့ သရဏဂုံသညျ အလိုလို ပကျြတယျ။
ဒီလို ပကျြစီးနညျးသညျ သာဝဇ်ဇ – အပွဈရှိတဲ့ သရဏဂုံပကျြစီးနညျး ဖွဈတယျ။
အပွဈရှိတဲ့ ပကျြစီးနညျးဆိုတာ ဘာကို ပွောတာလဲ –
သော စ အနိဋ်ဌဖလော ဟောတိ။
နောငျတဈခြိနျမှာ မကောငျးတဲ့ အကြိုးလညျး ရနိုငျတယျတဲ့။
ရတနာသုံးပါးရဲ့ အပွငျဘကျက ဖွဈတဲ့ ဆူးလနေတျကွီးတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အဲဒီနတျတှကို အလှနျအမငျး ရိုသစှော ရှိခိုးလိုကျသညျနှငျ့ တဈပွိုငျနကျတညျး မူလဆောကျတညျထားတဲ့ သရဏဂုံသညျ အလိုလို ပကျြစီးသှားတယျ။ ရှတေိဂုံဘုရားမှာ ပနျးတှေ လှူတယျ။ ရခေမျြးတှေ လှူတယျ။ လှူပွီးလို့ စတေီတျောကို ရှိခိုးပွီးတာနဲ့ ဟိုဘကျ လှညျ့ပွီးတော့ နတျကို ရှိခိုးလိုကျတာနဲ့ မူလဆောကျတညျထားတဲ့ သရဏဂုံသညျ အလိုလို ပကျြစီးသှားတယျ။ မိမိတို့ရဲ့ အငျမတနျ အဖိုးတနျနတေဲ့ သရဏဂုံကို မပကျြစီးစသေငျ့ဘူ။ အသိအလိမ်မာလေးနဲ့ စောငျ့ရှောကျသငျ့တယျ။
မငျးကွီးတို့ မငျးကလေးတို့ကို သှားပွီး ကိုးကှယျဆညျးကပျခဲ့လြှငျ၊ အလှနျအမငျး ရိုသစှော ရှိခိုးခဲ့လြှငျလညျး မူလဆောကျတညျထားတဲ့ သရဏဂုံသညျ အလိုလို ပကျြစီးသှားတယျ။
ပကျြစီးရုံတှငျ မဟုတျဘူး သူက –
သာဝဇ်ဇော – အပွဈလညျး ရှိတယျ၊ နောငျတဈခြိနျမှာ မကောငျးတဲ့ အကြိုးလညျး ရနိုငျတယျ။
ဒီ မငျးကွီးမငျးကလေးဆိုတဲ့ ဟာတှသေညျ ကိုးကှယျဆညျးကပျထိုကျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှလေား? ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ပါ။
မငျးကွီးတို့ မငျးကလေးတို့ ဝငျလာပွီ ဆိုလို့ရှိလြှငျ သူတို့ ဘာလုပျသလဲ..?။
အရကျသောကျတယျ၊ ကလညျး ကတယျ။ ဒီလို အရကျသောကျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို မိမိတို့က ကိုးကှယျဆညျးကပျပွီ ဆိုကွပါစို့။ မိမိအဆငျ့က အရကျသမားကို ကိုးကှယျဆညျးကပျတဲ့အဆငျ့ ရောကျမသှားဘူးလား? အလိုလို ရောကျသှားတယျ။
နောကျတဈခု – ဒကာကွီးတှေ စဉျးစားကွညျ့စမျးပါ။ ဘုနျးကွီးတို့ မွနျမာပွညျမှာ ကြေးရှာပေါငျး နှဈသောငျးကြျော ရှိတယျလို့ ဆိုတယျ။ နတျတျော ပွာသို ဝနျးကငျြလောကျ ရောကျလာပွီ ဆိုလို့ရှိရငျ မွနျမာပွညျရဲ့ အလအေ့ထအရ ကြေးရှာတိုငျးလိုလိုမှာ နတျပှဲဆိုတာ ရှိတတျပါတယျ။ ကြေးရှာနှဈသောငျးကြျော ရှိတော့ တဈနတေ့ဈနမှေ့ာ ပမျြးမြှခွငျးနှုနျးနဲ့ တှကျမယျဆိုလြှငျ ဆယျရှာ­မှာ နတျပှဲတဈပှဲလောကျတော့ ရှိနိုငျပါတယျ။ ဆယျရှာမှာ နတျပှဲတဈပှဲနှုနျးဖွငျ့ ကြေးရှာပေါငျး နှဈသောငျးကြျောဆိုတော့ တဈနမှေ့ာ နတျပှဲပေါငျး နှဈထောငျဝနျးကငျြလောကျ ရှိမယျ။ နတျတျော ပွာ­သိုဝနျးကငျြလောကျ ပွောတာပါ။ ဒီတော့ တဈနမှေ့ာ နတျပှဲပေါငျး နှဈထောငျလောကျရှိတော့ ဟို­နတျပှဲမှာလညျး မငျးကွီး မငျးကလေးကို ပငျ့ပွနျပွီ၊ ဝငျပူးပွနျပွီ။ ဒီနတျပှဲကလညျး မငျးကွီးမငျးကလေး ပငျ့ပွနျပွီ၊ ဝငျပူးပွနျပွီ။ မငျးကွီးမငျးကလေးက ဝငျပူးလာပွီဆိုလို့ရှိလြှငျ အခြိနျကလညျး နညျးနညျးပေးရဦးမယျ။ အရကျသောကျဖို့ အခြိနျကလညျး ပေးရသေးတယျလေ။ ကဖို့ ခုနျဖို့ ဓားမွှောကျပွဖို့ အခြိနျကလညျး ပေးရသေးတယျ။
ဒီတော့ နတျပှဲတဈပှဲကို သူက ငါးမိနဈလောကျ အခြိနျပေးမယျ ဆိုရငျပေါ့။ သူ တဈနတေ့ဈနမှေ့ာ ကနိုငျတာ တဈနာရီမှာ နတျပှဲ တဈဆယျ့နှဈပှဲ ရ­မယျ။
တဈနမှေ့ာ နတျပှဲတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ နံနကျ ၈-နာရီမှ ည ၄-နာရီ၊ ၅-နာရီအထိပဲ က,တော့၊ ဆယျနာရီပဲ ထားပါတော့။ တဈနေ့ ဆယျနာရီဆိုတော့ နတျပှဲပေါငျး တဈရာ့နှဈဆယျ။ အခုဟာက နတျပှဲပေါငျး တဈနတေ့ဈနေ့ ပြှမျးမြှအားဖွငျ့ နှဈထောငျကြျောနတေော့ သူပေးနိုငျတဲ့ အခြိနျက တဈနေ့ နတျပှဲပေါငျး တဈရာ့နှဈဆယျလောကျအတှကျပဲ ရှိတယျ။
ဟိုနတျပှဲကလညျး မငျးကွီးမငျးကလေး ပူးပွနျပွီ။ ဒီနတျပှဲကလညျး မငျးကွီးမငျးကလေး ပူးပွနျပွီ။ အဲဒါ ဝငျပူးနတောတှေ အကုနျလုံး မငျးကွီးမငျးကလေး ဟုတျ,မဟုတျ ဆိုတာကတော့ စဉျးစားဖို့ မလိုဘူးလား? လိုနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အနီးစခနျးဆရာတျောဘုရားကတော့ သူ့ရဲ့တရားတဈပုဒျထဲမှာ သူက ဘယျလိုပွောထားသလဲ –
“လူ့လောကမှာ အလိမျခံလူတနျးစားက အမွဲတမျး ရှိတယျ လိမျမညျ့လူသာ လိုတာ..” တဲ့။
လိမျမညျ့သူကသာ ကကြနြန လိမျ။ အလိမျခံ လူတနျးစားက အမွဲတမျး ရှိပွီးသား ဖွဈတယျ။
ဒါက ဒကာကွီးတှေ တျောတျောလေး လေးလေးနကျနကျ စဉျးစားဖို့ ကောငျးတယျ။
ဒီလောကျတောငျ အဆငျ့နိမျ့နတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို ဘုရားနဲ့ တနျးတူထားပွီးတော့ အိမျမှာ ကိုးကှယျဆညျးကပျနကွေတယျ။ အဲဒီလို ကိုးကှယျဆညျးကပျကွတဲ့အထဲမှာ သာသနာ့ဝနျထမျး ရှငျရဟနျးတဈခြို့လညျး ပါနကွေပွနျတယျ။
သူတို့ကနေ ရှဆေ့ောငျပွီးတော့ မငျးကွီးမငျးကလေးကို ကိုးကှယျဆညျးကပျတယျ။ ဆညျးကပျလိုကျတော့ သူက ဘာအမိနျ့ထုတျသလဲ? သူ့ကြောငျးထဲ ဝကျသား မသှငျးရဘူး..၊ ဘာဖွဈလို့လဲ? မငျးကွီးမငျးကလေး မကွိုကျလို့.. ။ သူက ဘုရား မကွိုကျတဲ့ အလုပျကတြော့ သူ ရဲရဲလုပျတယျ၊ အဝတျကတော့ သာသနာ့ဝနျထမျး ရှငျရဟနျး။ ဒါပမေဲ့လို့ သူက မငျးကွီး မငျးကလေး မကွိုကျတာကတြော့ ကြောငျးထဲ မသှငျးရဘူး။ ဘုရား မကွိုကျတာကတြော့ ကြောငျးဝငျးထဲသှငျးတယျ၊ ရှကျဖို့ မကောငျးဘူးလား? သိပျရှကျဖို့ ကောငျးပါတယျ။ နောကျလိုကျ ဒကာဒကာမတှအေတှကျ သိပျပွီးတော့ ဝမျးနညျးစရာကောငျးတယျ။